Mogadishu Journal » Wariye Axmed Kismaayo oo ku geeriyooday dalka India
Mjournal :-Allaha u naxariistee Wariye Ahmed Maxamed Cali (Ahmed Kismaayo), ayaa ku geeryooday isbitaal ku yaalla dalka India.
Axmed Kismayo ayaa la xaqiijiyay saaka aroortii inuu u geeriyooday xaaladii dhanka caafimaadka aheyd ee haysatay, sida ay xaqiijiyeen qaar ka tirsan ehelada Marxuumka.
Wariyaha ayaa waxaa mudo aad u badan uu lasoo shaqeeyay laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da.
Dhinaca kale Axmed wuxuu ka mid ahaa Wariyayaashii Wasaaradda Warfaafinta ee Dowaldii Somaliya, markii bur burku uu dhacay wuxuu ka mid noqday aasaasaayaashii Warbaahinta Puntland, waxaana uu billaabay soo saarista Wargeys madax banaan.
Suxufiyiinta Soomaaliyed ayaa u diray qoyska Marxuumka tacsi, waxaana Alle ay uga baryeen in Janadii Fardowso uu ka waraabiyo.